Nchịkọta akụkọ: Site na nwoke nwere mmasị nwoke gaa na nzuzo na 'IT: Isi nke Abụọ'
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Nchịkọta akụkọ: Site na nwoke nwere mmasị nwoke gaa na nzuzo na 'IT: Isi nke Abụọ'
Akụkọ Ntụrụndụ ụjọLGBTQ ụjọ
by Waylon Jordan September 15, 2019
edere ya Waylon Jordan September 15, 2019
Ndị na-akwado Stephen King na-akwụ n'ahịrị ihe karịrị otu izu ugbu a iji hụ IT: Isi nke abuo, ọkara nke abụọ nke Andy Muschietti na Gary Dauberman's mmegharị nke King's iconic akwụkwọ.
Nzaghachi nke ndị nkatọ na ndị na-agbapụ na-abụkarị nke dị mma, mana ndị LGBTQ enweela ezigbo nsogbu na-enweghị ntọala na mmegharị ọhụrụ ahụ na ngosipụta nke otu n'ime ihe egwu kachasị egwu nke akwụkwọ ahụ yana njikwa ya banyere mmekọahụ onye ọzọ.
Ọ na-aga n'ekwughị na a ga-enwe ndị na-apụnara mmadụ ihe n'okpuru akara a maka IT: Isi nke abuo. Biko, nye ndụmọdụ.
Onye ọ bụla gụrụ akwụkwọ ahụ maara akụkọ banyere Adrian Mellon, otu nwa okorobịa nwoke nwere mmasị nwoke nwoke nke otu nwoke nke ndị nwoke na-edina ụdị onwe ya kụrụ ya ihe n’ikpeazụ wee tụba n’akụkụ mmiri ahụ wee wuchaa Pennywise the Clown.
King sere akụkọ sitere na ezigbo ndụ nwoke nwere mmasị nwoke - nke nwere mmetụta dị ukwuu na ya mgbe ọ gụrụ okwu ahụ, o jiri ya mee ihe atụ nke otu Pennywise / IT ka si metụta obodo Derry, ọbụlagodi ka ọ na-ehi ụra. Ihe omume a jọgburu onwe ya na akwụkwọ ahụ, wee gwuo egwu na ihuenyo dị na fim ọhụrụ nke Muschietti.
Agbanyeghị, enwere nnukwu ọdịiche dị n'etiti abụọ ahụ.
N'akwụkwọ ahụ, King kọọrọ akụkọ ahụ site na nchegharị mgbe ndị bashers na enyi nwoke Adrian na-akọ akụkọ ndị dugara n'abalị ahụ. Ọ gakwara n'ihu mee ka anyị mara na a na-ata ndị na-edina ụdị onwe ha ahụhụ maka mpụ ha, ọbụlagodi na, n'ogo ụfọdụ, ndị uwe ojii na ndị ọka iwu metụtara metụtara karịrị n'akụkụ ndị basher karịa Adrian.
Ikpe ziri ezi maka Adrian nwere nkwenye atọ nke igbu mmadụ na ụmụ nwoke abụọ a tụrụ mkpọrọ n'etiti afọ iri na afọ iri abụọ n'ụlọ mkpọrọ.
Site na ihe nkiri ohuru a, anyi huru mmebi iwu a, ya abia ihe mmeghe Mike Hanlon ka o gakwuru ndi Losers na echetara ha iyi ha nke ilaghachi na Derry ma merie Pennywise otu mgbe na ihe nile kwesiri ka o bilie ozo.
Dị ka ọtụtụ ndị omempụ ịkpọasị, Adrian anaghị akpọtụ aha ọzọ, na ọtụtụ ndị nọ na mpaghara queer, echere m na eziokwu ahụ dakwasịrị ngwa ngwa.
E kwuwerị, dị ka ọ dị n'akwụkwọ King, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe nkiri mbụ na fim ahụ. Fọdụ kwuru na ọ gaara abịa na ịdọ aka na ntị na-akpali akpali, mana Muschietti na Dauberman na-ekwu maka itinye ihe nkiri ahụ ihe karịrị otu afọ, ugbu a, yabụ ejighị m n'aka otu ịdọ aka na ntị karịrị ike mmadụ chọrọ.
Ndị ọzọ ekwuola na enweghị ntaramahụhụ bụ, opekata mpe, enweghị isi mgbe mpụ ndị a ka na-eme kwa ụbọchị. Ọ bụ ezie na m kwenyere na nke a, echeghị m na ịgafe usoro ahụ niile nke nkwupụta na ihe ọ bụla ọ gụnyere agaghị ewelata ihe nkiri nke na-emechi ugbu a ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa atọ na-agba ọsọ.
Ka o sina dị, usoro ahụ dum dị ka a na-edozi ya n'ụzọ na-egosi na ọ na-egosipụta omume obi ọjọọ n'ụzọ ụfọdụ ndị na-ege ntị adịghị njikere ịhụ.
Ebe ndị na-ege ha ntị na-ada ụda site na obi ịta mmiri a, agbanyeghị, Dauberman na Muschietti, n'ihi ihe ọ bụla kpatara ya, buru ụzọ ha ga-aga n'ihu mgbe ha kpebiri idobe koodu otu n'ime ndị Losers dị ka nwoke nwere mmasị nwoke.
Maka ndị na-amaghị akwụkwọ, ntinye akwụkwọ queer bụ usoro nke onye edemede ma ọ bụ onye nduzi na-etinye ihe n'ime akụkọ iji gosi na agwa bụ queer n'ebughi n'ezie gosipụta njirimara queer. Ermepụta Queer bụ ihe gbara ọkpụrụkpụ nke ịse ihe nkiri n'oge koodu Hays na mbido narị afọ nke iri abụọ na-adịghịzi ele anya dị ka omume dị mma, na n'ikpeazụ na-emebi obodo queer.
Ọ bụrụ na ị hụla ihe nkiri a, mgbe ahụ ịmara na m na-ekwu okwu nke ụda olu gọọmentị nke Loser Club bụ Richie Tozier bụ onye Dauberman na Muschietti họọrọ ka ha bụrụ nwoke nwere mmasị nwoke.
Otú ọ dị, ihe na-enye nsogbu na fim a bụ mmekọrịta ha na-ejikọ iji mepụta ịdị n'etiti ndị queer na trauma na mbọ ha na-agbaso agwa Richie. Mmekọahụ nke Richie ghọrọ isi okwu nke "trauma" ya, mana ọzọ, ọ bụtụbeghị n'ezie agwa okwu n'agbanyeghị na e nyere anyị nlebara anya na mmepe maka ihe odide ndị ọzọ.
Bill ka na-ata ahụhụ n'ihi ọnwụ Georgie na ọ na-etinye ihe ka ukwuu n'ime ihe nkiri ahụ na-anwa ichebe obere nwa nwoke ọzọ nke na-echetara ya obere nwanne nwoke Pennywise nara ya.
Beverly nwetara mmekpa ahụ n'aka nna ya, wee tolite ịlụ nwoke nke na-akparị mkparị. Anyị na-ele ya ka ọ na-eme mkpebi ịhapụ ya, ọzọkwa, ọ na-enwe ngwụcha obi ụtọ, na-agba ọsọ na nnukwu onye na-ese ụlọ Ben bụ onye, ​​ị maara, ọ bụghị abụba ọzọ ma bụrụkwa onye kwesịrị ka a mara ya ma hụ ya n'anya, nke bụ nsogbu kwurita ụbọchị ọzọ.
Hypochondriac Eddie Kaspbrak tolitere wee lụọ nne ya - otu nwanyị na-eme ihe nkiri na-egwuri egwu n'akụkụ abụọ ahụ na fim. Ọ na-a suụ ihe ọ bụla na-eme ya mgbe niile, nsogbu ya dịkwa n'ebe onye ọ bụla ga-ahụ.
Ma Mike, onye na-ere ọkụ, na-ebu ibu nke ihe Derry nwere ike ibu n'ubu ya n'otu oge ka ọ na-arụkwa ọnwụ nke ndị mụrụ ya mgbe ọ bụ nwata, na-agbagha mmetụta Pennywise ugboro ugboro.
Ọ bụghị Richie. Richie "trauma" zoro na ebe naanị ya maara. O di nwute na ya, Pennywise nwekwara ike inweta ebe ahu ma jiri ya mee ihe akaja ma ta akaja Richie banyere ya, wee ju ya anya n’ebe ndi mmadu na-acho ma o choro igwu Eziokwu ma obu Dare.
Na flashback, anyị na-ahụ Richie egwu a egwuregwu na Arcade na a mara mma na-eto eto Ihọd onye dị mwute ikwu na amama-abụ Henry Bowers nwanne nwanne, na-enye onye na-emegbu ya ohere ịtụba gburugburu ya mmasị epithet – amalite na “f” na rhymes na “akpa ”- Di na nwunye ole na ole ka Richie gbapụrụ.
Ọ bụ okwu a ma ama na edemede Dauberman. Otu nke o nwere ike iji obere obere oge, ọbụnadị site na mkpụrụedemede ndị na-agaghị atacha anya na-ekwu ya.
N'ezie, ọ na-atụ Adrian ugboro ugboro mgbe a na-akụ ya ihe, wee tụgharịa ugboro ugboro site na Bowers nke mere na amalitere m ịjụ ma Richie okenye etubigara otu akara aka ahụ.
Ka oge na-aga, anyị hụrụ Richie na-eto eto ka ọ na-eto n'ime oghere ha ma Eddie rịgoro na-arapara ụkwụ na ihu enyi ya nke Richie na-enyo enyo ọ bụghị tufuo otu n’ime ihe ọ na-emebu.
Mgbe ahụ, anyị na-ahụ Richie ka ọ na-atụ ihe n'ime osisi osisi na akwa mmiri ochie na-ejide ntakịrị ntakịrị ihe ọ bụ.
Okenye Richie bibiri kpamkpam mgbe Eddie nwụrụ mgbe ọ na-alụ ọgụ Pennywise na njedebe nke ihe nkiri ahụ wee daa n'ihu ndị Losers na-akwa ákwá tupu ya akwaa ákwá na iko ya efunahụla. Ndị enyi ya na-abanye n'ime mmiri nke ebe ahụ iji nyere ha aka ịchọta, nke, dị ka ọ dị, bụ oge dị mma maka Bev na Ben ịpụta n'ime mmiri, mana ọ bụghị oge dị mma maka Richie ịkọ ihe kpatara ya ji wute ya nke ukwuu ọnwụ nke enyi ha.
A hụrụ Richie, na oge ikpeazụ nke ihe nkiri ahụ, ka ọ na-alaghachi n'ihe ọ na-ese site na mbụ, na-eme ka mbelata ndị meworo ka oge na-aga, ma na-ekpughe R + E na-eme ka ihe ngosi ndị ahụ niile gara aga pịa maka ndị na-ahụbeghị ihe ịrịba ama na mbụ.
Aga m ekweta na mgbe m kiriri ya, ihe ahụ kpaliri m ma m ka nọkwa.
Ọ bụ ruo otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ ka e mesịrị ka ọ kụrụ m na ọzọ, ndị na-atụ ụjọ na-atụ ụjọ n'ihi agụụ nke nnọchi anya n'ụdị na anyị hụrụ n'anya na anyị na-ewere aha abụọ na mpempe osisi ma chee na anyị ' e je anọduje lẹ nri.
Ọzọkwa, mgbe ị na-elele ebe ahụ site na anya nzuzo mgbe emechara mmekọrịta nwoke na nwanyị na ihe nkiri mmeghe, ọ fọrọ nke nta ka ọ dị ka query nke Richie na ndị na-ege ntị na fim ahụ na-erigbu maka nri anụ mmụọ otu oge na nsogbu na ugboro abụọ na enweghị ịhụnanya.
Iji mee ka o doo anya, ekwetaghị m na ma Dauberman ma ọ bụ Muschietti ga-emerụ obodo ahụ nsogbu. N'ezie, ekwenyere m na ọ ga-ekwe omume na ha na-anwa ịkpata obere nnọchi anya ụdị ahụ.
Agwara m nnọchite Dauberman ugboro abụọ mgbe m na-eme atụmatụ edemede a, mana ka ọ na-ede, enweghị m azịza ọ bụla.
Eziokwu bụ na e nwere ọtụtụ ụmụ nwoke afọ 40 n'ụwa ka na-emekọ eziokwu ahụ bụ na ha bụ, n'ụzọ ụfọdụ, ndị na-achọ ọrụ, na ndị na-apụtabeghị ma ọ bụ na ọ nweghị ihe kpatara na ha ga-eme ngwa ngwa ma mee otú ahụ. Ingpụ apụ bụ nke onwe, yana ihe ọtụtụ ndị otu obodo ga-agwa gị na anyị ga-eme ugboro ugboro na ndụ anyị.
Na-eleghachi anya azụ IT: Isi nke abuo, Enweghị m ike iche ma na ọ bụrụ na onye edemede na onye nduzi nwere ike ịme mkpebi ịgbakwunye ihe a na akụkọ Eze, ha nwere ike inye Richie otu oge ebe o guzobere Pennywise, nwe njirimara ya, ma weghachite ụfọdụ ike ọjọ di na ya. Okwesighi ime n'ihu ndị enyi ya ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ, mana ọ nwere ike ịbụ hel nke ọnọdụ na-enye ike maka Bill Hader igwu egwu na maka ndị na-ege ntị, n'agbanyeghị ụdị ha bụ, ịhụ.
O di nwute dika o noro oge kacha mma IT: Isi nke abuo, mgbalị ha gụrụ dị ka ụda ntị chiri na nke kachasị njọ, nkwụghachi azụ na oge ọ kachasị amasị ya ị zoo ndị odide njegharị na mgbakwunye queer ndị mmadụ na ọchịchịrị gbara ọchịchịrị iji dozie nsogbu nke ha na-enweghị enyemaka nke obodo ma ọ bụ ndị mmekọ.
Andy MuschiettiBill HaderFinn WolfhardGary DaubermanỌ: Isi nke AbụọWaylon Jordan
A wepụtara New Animatronics Halloween Spirit
Richard Brake nwere Ibu Ọrụ buru ibu na '3 Site na Hel' n'ihi Sig Haig's Health